दसगजा मिचेर घर निर्माण तीव्र « Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha
« कोशीमा बाढीले जनजीवन प्रभाबित
Nepali man holds world record for fourth time by shaking hands »
दसगजा मिचेर घर निर्माण तीव्र
नयाँ पत्रिका By मोहन भट्टराई
विराटनगर, ८ साउन
नेपाल-भारत सीमास्थित मोरङका विभिन्न क्षेत्रमा दसगजा अतिक्रमण गरी घर बनाउने क्रम तीव्र भएको छ । सीमाको दसगजा क्षेत्रमा दुवै देशका नागरिक घर बनाएर परिवारसहित बस्दै आएका छन् ।
दसगजा क्षेत्र मिच्न नपाइने नियम भए पनि नेपाल र भारत दुवैतर्फका नागरिकलेे सीमा अतिक्रमण गरी घर बनाइरहँदा दुवै देशका सम्बन्धित निकाय मौन छन् । अतिक्रमण गरेर बसेका परिवारलाई हटाउन कुनै पहल भएको छैन ।
मोरङको सीमावर्ती दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरी तीन सय ६९ घर परिवार बसेका छन् । यो संख्या नेपाली सुरक्षाकर्मीले दसगजा क्षेत्रमा गरेको गणनाबाट आएको हो । दसगजामा बस्नेमध्ये नेपालतर्फका १ सय ८३ र भारततर्फका १ सय ८३ परिवार रहेको सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा कार्यालय मोरङले जनाएको छ । तर, दसगजा मिचेर बनेका घर सरकारी तथ्यांकभन्दा चौगुणा बढी छन् । ‘यही एरियामा सयभन्दा बढी घर छन्,’ मोरङ बुधनगर- ५ का स्थानीय मुकेश यादवले भने ।
दसगजा क्षेत्रमा पक्का घर र मन्दिर पनि बनाइएको छ । दसगजा क्षेत्रको दुवैतर्फ अतिक्रमण गरी घर निर्माण गर्नुका साथै अधिकांश स्थानमा खेती लगाइएको छ ।
सीमाको पिलरभन्दा दक्षिणपट्टि भारततर्फका र उत्तरपट्टि　नेपालतर्फबाट अतिक्रमण गरेर ती परिवार बसेका छन् । दुवै देशले पहल गरेर मात्रै उनीहरूलाई हटाउन सकिने भएकाले एकतर्फी रूपमा हटाउन समस्या भएको सीमा सुरक्षा कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
दसगजा क्षेत्रमा बसोबास गर्दा दुवै देशको बासिन्दा भनेर दुवै देशका जनतालाई प्राप्त हुने सुविधा उपभोग गर्न मिल्ने भएपछि घर निर्माणको क्रम तीव्र भएको हो । अतिक्रमित दसगजा क्षेत्रमा अधिकांशसँग भारत सरकारले दिने रासनकार्ड छ भने नेपाल सरकारले दिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत रहेको बुधनगर गाविसका स्थानीय मुकेश यादवले बताए । ‘उनीहरू नेपालमा चुनाव हुँदा यताका मतदाता बन्ने र भारतमा चुनाव हुँदा उता भोट हाल्न पनि तयार हुन्छन्,’ यादवले भने ।
दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर घर बनाउने क्रम बढ्नुका साथै नेपालतर्फका सीमास्तम्भसमेत हरेक वर्ष हराउने गरेका छन् । मोरङसँग जोडिएको २१ ठाँउमा सीमा अतिक्रमण भएको　पाइएको सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक भोला गिरीले बताए । मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका जंगे र सहायक गरी एक सय २४ वटा सीमास्तम्भमध्ये ४१ वटा सीमास्तम्भ हराएको र अहिले ८३ वटा मात्र बाँकी रहेको गिरीले जानकारी दिए । ‘त्यसमा मोरङको बरडंगा गाविसले छोएको स्थानका सीमास्तम्भ सबैभन्दा बढी हराएको पाइएको छ,’ सशस्त्र प्रनाउ गिरीले भने ।
बरडंगामा मात्रै २७ वटा सीमास्तम्भ हराएका छन् । त्यसैगरी विराटनगरको सिमानामा आठ, रंगेलीमा तीन र झुर्कियामा दुईवटा पिलर हराएको सीमा सुरक्षा कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी रहेकामध्ये पनि १८ वटा स्तम्भ भत्किन थालेकाले मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । मोरङका १२ गाविस भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । भारतसँग ५५ किलोमिटर सीमा जोडिएको मोरङमा असुरक्षाका कारण एक दशकसम्ममा सीमास्तम्भको निरीक्षण र मर्मत हुन नसक्दा सीमा अतिक्रमण र सीमास्तम्भ हराइरहेका छन् ।
‘स्तम्भ कहाँ थिए भन्ने संकेतसमेत छैन,’ गिरीले भने । उनका अनुसार नेपाल भारत-सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले विगतमा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन कूटनीतिक पहल गर्ने र नयाँ निर्माण भए संयुक्त रूपमा हटाउने सहमति भएको छ ।
नेपाल-भारत सुरक्षासम्बन्धी बैठकमा सीमा र पिलरका कुरा उठे पनि मौखिक रूपमा एकअर्कालाई सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति हुने गरेको, तर त्यसको कार्यान्वयन हालसम्म दुवै पक्षबाट हुन नसकेको प्रनाउ गिरीले बताए । नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय समिति खारेज भएकाले सीमासम्बन्धी काम दुई वर्षयता हुन नसकेको नापी शाखा मोरङले जनाएको छ ।
दशक लामो द्वन्द्वको समयमा स्तम्भको निरीक्षण तथा मर्मत गर्न नसक्दा अभिलेख उल्लेख भएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तम्भ हराएको स्वीकार गर्दै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश अधिकारीले हराएका स्तम्भ र तिनको यथास्थान पत्ता लगाई पुनस्थापना र जीर्ण स्तम्भ मर्मत गर्न नेपाल-भारत सीमा अधिकारीबीच विगतमा सहमति भएको बताए ।
This entry was posted on July 25, 2010 at 2:41 pm	and is filed under समाचार. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “दसगजा मिचेर घर निर्माण तीव्र”
Dhukha lagyo padera..neta haru kurchi kai chinta chha… Nepali neta murdabad…go to hell